ကျွန်တော်နဲ့ဖွတ်ချက်အုပ်စု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကျွန်တော်နဲ့ဖွတ်ချက်အုပ်စု
Posted by တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေရင်း ရှုံးနိမ့်နေသူတစ်ဦး။ on Feb 7, 2011 in My Dear Diary, Opinions & Discussion |4comments
ကျွန်တော်တို့မြို့မှာ လိုင်းရတာမကြာသေးတော့ ကျွန်တော်လည်း အင်တာနက်ဆိုတာကြီးကို အခုမှထိတွေ့ဖူးတယ်။ ညီဝမ်းကွဲက အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်တော့ ကျွန်တော်က သူ့ဆီကလိုင်းခွဲယူတယ်လေ၊ သူကပဲ အစအဆုံးအကုန်လာလုပ်ပေးသွားတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဘာမှတတ်စရာမလိုဘဲ ကွန်ပြူတာဖွင့်တာနဲ့ အိုကေဖြစ်နေခဲ့တာ။ ကျွန်တော် စိတ်ကူးတစ်ခုပေါက်ပြီး ကလေးတွေကို အင်တာနက်နဲ့ ထိတွေ့ပေးချင်မိတယ်။
ကျွန်တော်တို့လမ်းက ဆင်းရဲသားအများစုနေတဲ့ သီးသန့်လမ်းကလေးပါ။ စုစုပေါင်း အိမ်၁၀လုံးပဲရှိတယ်။ မျိုးဆက်သစ်များရဲ့ အခြေအနေကိုပြောရရင် တစ်လမ်းလုံးမှာ ကျွန်တော့်သမီးအပါအ၀င် ကလေးပေါက်စနက သုံးယောက်။ ကလေးကြီးက ၄ယောက်။ ဒီကလေးကြီးတွေဟာ သူများကလေးကြီးတွေလို ဂိမ်းဆိုင်ထိုင်နိုင်တဲ့ ကလေးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ကွန်ပြူတာမှာ ကြွက်ခလုတ်ကိုတောင် မကိုင်တတ်တဲ့ကလေးတွေပါ။
ကျွန်တော်လည်း အင်တာနက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ညီဝမ်းကွဲရဲ့ အကူအညီနဲ့ အိမ်မှာ ကွန်ပြူတာ အစုတ်ကလေး ၂လုံးထပ်ဆင်ပြီး ကလေးတွေကို ကွန်ပြူတာလာကိုင်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်တော့ ကလေးတွေက နေ့မဆိုင်းဘဲ ချက်ချင်းလာအားပေးကြတယ်လေ။ ကျွန်တော်က ပထမ ကြွက်ခလုတ်ကိုင်တတ်အောင် ဂိမ်းကစားခိုင်းတယ်။ အကြီးဆုံးကလေးကို အရင်သင်ပေးပြီး သူကမှတဆင့် အောက်အငယ်တွေကို သင်ပေးသွားအောင်လို့ပါ။ ကြွက်ခလုတ်ကိုင်တတ်အောင် တော်တော်သင်ရပါတယ်။ ရက်နည်းနည်းကြာတော့ ကျွန်တော်က ၀က်ဆိုက်တွေဖွင့်ပြပါတယ်။ မေးခွန်းတွေက ဒီမှာစတော့တာပါပဲ။
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့မေးခွန်းဟာ အမြဲတမ်း ထင်မထားတဲ့မေးခွန်းဖြစ်နေတယ်။ တစ်ပိဿာလို့ခေါ်တဲ့ ခလေးမက ဂူဂယ်ဆိုတာ ဘာလဲတဲ့။ တစ်ပိဿာလို့ခေါ်တာက သူ့အမေ အသုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က သူ့ကို အာလူးတစ်ပိဿာကြော်ကျွေးတာ ကုန်အောင် စားနိုင်လို့ပါ။ ကလေးကြီးတွေထဲမှာ အ၀ဆုံးကလေး၊ ကျွန်တော့် အိမ်ရှေ့က မာလကာပင်ကို အလွတ်မပေးတဲ့၊ ခြောက်တန်းကြီးများတောင်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ တကယ့်ဆတ်ဆတ်ကြဲ ကောင်မလေး။ ဒီခလေးမလေးမေးခွန်းကို အမှန်ပြောရရင် ကျွန်တော်မဖြေတတ်ဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်တော်က “နောက်တော့သိမှာပေါ့၊ တစ်ပိဿာရယ်” လို့ ခပ်တည်တည်ရွှီးလိုက်ရတယ်။ နောက်တော်တော်ကြာတော့ ငမြွေထိုးက မေးတယ်ဗျ။ “အွန်လိုင်းဆိုတာ ဘာလဲ“ တဲ့။ ဒါလည်း ကျွန်တော်ဖြေတတ်ပါတယ်။ ၀ါယာလက်နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့အဖြူရောင် ကြိုးကိုပြပြီး “အွန်ဆိုတာ အပေါ်မှာ လိုင်းဆိုတာက ဒီလိုင်းကိုပြောတာ။ မင်းတို့ကောင်တွေ စာသင်မယ်မကြံသေးဘူး။ အမေးအမြန်းကထူပြီ” ဆိုပြီး ခပ်တင်းတင်း ဖိန့်ထည့်လိုက်လို့ သူတို့ထပ်မမေးကြဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သိနေတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တတ်မှဖြစ်တော့မယ်။ ၀က်ဆိုက်တွေကိုလည်း ကျွန်တော် သိပ်မသိဘူး။ ကျွန်တော်ဖွင့်ပြတဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေက သူတို့အတွက် မြင့်နေသလား မသိဘူး။ သူတို့ ခဏတဖြုတ်ပဲ ကြည့်ကြတယ်။ ပြတိုက်လို ၀က်ဆိုက်မျိုးကိုတောင် သူတို့ သိပ်မဖတ်တတ်ကြဘူး။ ပြီးတော့ ကွန်ပြူတာက ခဏခဏပျက်တယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း မပြင်တတ်၊ ညီဝမ်းကွဲကိုပဲ အမြဲအားကိုးနေရတယ်။ သူကလည်း သူ့အလုပ်နဲ့သူ၊ အချိန်ပြည့် ကျွန်တော့်ကိုကူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဒါတွေကိုနည်းနည်းလေ့ လာမှဖြစ်တော့မယ်လို့ မနည်းကြီး မိမိကိုယ်ကို ဆုံးမရတယ်။ လူ့ဦးနှောက်ဆိုတာကလည်း ခက်သားကလား၊ အသက်ကြီးလာလေ၊ အသစ်အဆန်း မသင်ယူချင်လေ။
အခု ကလေးတွေ စာမေးပွဲနီးပြီ။ ခုတလော သူတို့လေးတွေ ကျောင်းနဲ့ကျူရှင်ပြေးနေကြတော့ မအားကြဘူး။ စာမေးပွဲကြီးပြီးရင် ကျွန်တော့် အိမ်လာပြီး ဆော့ကြတော့မှာ။ ဒီကြားထဲမှာ ကျွန်တော် တစ်လလောက်အချိန်ရသေးတယ်။ ကျွန်တော် ရန်ကုန်တက်ပြီး ကွန်ပြူတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ရှာရတော့မယ်။ ၆ တန်း ၇ တန်း အရွယ်ကလေးတွေဟာ ဘယ်လိုဝက်ဆိုက်တွေနဲ့မှ အဆင်ပြေမလဲမသိဘူး။ သိတဲ့လူများရှိရင် ပြောကြပါလို့ အကူအညီတောင်းပါတယ်။
http://www.myanmartutorials.com/articles/how-to-introduct-your-children-with-computer/ မှာ လေ့လာကြည့်ပါ – ဘယ်ဆိုဒ်တွေက ကလေးတွေအတွက် အသုံးဝင်လဲ ဆိုတာ ရေးထားတာရှိပါတယ် ..
တကယ်တော. လူငယ်တွေအနေနဲ. အဲ နယ်ကလူငယ်တွေပေါ. ဗျာ
သူတို.တွေအနေနဲ.က ကွန်ပျူတာဆိုတာဖြူလားမဲလားတောင်သေချာသိသေးတာမဟုတ်ဘူးဗျ အဲ.ဒီအချိန်မှာ google လိုမျိုးwebsite တွေကိုမသင်ပေးသေးပဲနဲ. ကွန်ပျူတာရဲ. basic ကိုစပြီးသင်ပေးရင်ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်လို.ထင်ပါတယ်
ကျွန်တော်လဲနယ်ကပါပဲ ကျွန်တော်တို.စပြီးသင်တုန်းလဲအဲ.ဒီလိုပဲသင်ခဲ.ရတာပါ mouse ဆိုတာဘာလဲ keyboard ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာကနေစပြီးတော. သင်ခဲ.ရတယ် အဲ.ဒီကမှ microsoft application တွေကိုမသွားခင်မှာ paint ကိုအရင်သင်ပေးတယ် game ကိုတော.မကစားခိုင်းဘူး ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော. ဂိမ်းကစားတာကတစ်ခြားapplication တွေနဲ.မတူဘူးလေ
သူက ကစားပြီဆိုရင် တစ်ခြားဘာကိုမှဆက်မလုပ်ချင်လောက်အောင်ကိုစွဲလမ်းစေတာ
ကွန်ပျူတာနဲ.ပါတ်သက်ရင်တော. “ကွန်ပျူတာတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ”ဆိုတဲ.စာအုပ် “ကွန်ပျူတာအခြေခံ အသုံးချနည်းပညာ” ” Microsoft Office ” စတဲ. အခြေခံစာအုပ်တွေပဲလိုအပ်အုံးမယ်ထင်ပါတယ် ကိုယ်တိုင်လေ.လာချင်ရင်တော. အင်တာနက်လမ်းညွှန် လိုစာအုပ်မျိုးတွေကအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ် ဒီစာအုပ်မျိုးတွေက ရန်ကုန်လာမှမဟုတ်ပါဘူး နယ်မှာလဲရနိုင်ပါတယ်
အခုကျနော်ပြန်ဖတ်နေတဲ့ “လွယ်ကူလေ့လာကွန်ပျူတာ” ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကောင်းတယ် ဖိုးနိုင်ဝင်း (Masterpiece) ရေးတာ ပုံလေးတွေနဲ့ ကာတွန်းလိုမျိုးရှင်းပြထားထာတွေက လူကြီးရော ကလေးတွေပါနားလည်လွယ်ပီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် Computer ဆိုတာဘာလဲ Keyboardဆိုတာဘာလဲ Mouseဆိုတာဘာလဲ ကအစကောင်းကောင်းနားလည်သွားနိုင်စေတယ်
မှန်ပါတယ် အစ်ကိုရေ… အင်တာနက်ဆိုတာ ခဏအသာထားပြီး ကလေးငယ်တွေ ကို ကွန်ပျူတာ အခြေခံက စပြီး သင်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်… ကိုယ်တွေ့ပါဗျာ… basic လောက်မှ မကျွမ်းကျင်သေးပဲ… အင်တာနက်ဆိုတာကြီးကို သိတ်မလှမ်းသင့်ပါဘူး… mouse ကို ကျွမ်းအောင်၊ keyboard နဲ့ရင်းနှီးအောင် typing tutor လို… တစ်ခြား typing game လေးတွေကို အရင် သင်ပေးသင့်ပါတယ်…